1. အားလုံးအဆက်အသွယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်ဆင်းထားသည် 304 Packer အပေါ် stainless steelfood တန်း, ချေးသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ရှည်လျားသောသက်တမ်း.
2. အစပြုသူအဘို့အလွယ်ကူသောတပ်ဆင်, ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာမလိုအပ်ပါ.
3.Automaticrice ထုပ်ပိုးစက်, ဖွင့်အိတ်၏ပွင့်လင်းပါးစပ်ကိုယ်တိုင်သာလျှင်.
5.ကိုယ်တိုင်ချိန်ကိုက်ဆော့ဝဲဖြင့်ဆန်စပါးအလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်, အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ခြင်း, အလွန်အကျွံနှိုးဆော်သံ, အလိုအလျောက်နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဒုက္ခစစ်ဆေးခြင်း.
ဒီအလိုအလျှောက်ဆန်ထုပ်ပိုးစက်ကိုအများအားဖြင့်ဆန်အရေအတွက်အလိုအလျှောက်ထုပ်ပိုးရန်အသုံးပြုသည်,အမျိုးအနွယ်,granular, strips တွေ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှု,နှင့် granular- အမှုန့်ပစ္စည်းများ,ဆန်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်သည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများထုပ်ပိုးနိုင်သည်, ဆန်လိုမျိုး,ဂျုံ ,ပြောင်းဖူး,တရုတ်ဆေးပညာ granular, ဖရဲသီးမျိုးစေ့, ဆားငန်, အစားအစာ,အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ, ဓာတ်မြေသြဇာ, ယူရီးယား,နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ, ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ, ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်မြေသြဇာ, အစာကျွေး,အဝတ်လျှော်မှုန့်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ etc.this ဒီထုပ်ပိုးစက်ပြီးပြည့်စုံသောအတွက် optional ကိုရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် ဆန်စက်စက်ရုံ ပစ္စည်းကိရိယာများ.
1. အဆင့်သုံးဆင့်မြန်နှုန်းနှင့်အတူအလိုအလျောက်ဆန်ထုပ်ပိုးစက်: အစာရှောင်, အလယ်အလတ်နှင့်နှေး.
2.မြင့်မားသောတိကျသည့်အာရုံခံကိရိယာနှင့်မြင့်သောအသိဥာဏ်ရှိသောမီတာနှင့်ကိုက်ညီသောထုပ်ပိုးစက်မှန်ကန်သောအာရုံခံစနစ်လုပ်ဆောင်ချက်, အာရုံခံကိရိယာအမှားများကိုလျှော့ချရန်ကူညီခြင်း, အော်တိုထုပ်ပိုးစက်သည်တိုင်းတာခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေသည်.
3.ကိုယ်တိုင် - စံကိုက်ညှိခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်စံကိုက်ညှိခြင်း, အမှားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရေရှည်အသုံးပြုမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကိုကျော်လွှားရန်တိုင်းတာမှုများကိုအလိုအလျှောက်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသောမိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ.
4.ထုပ်ပိုးနံပါတ်နှင့်အရေအတွက်အလိုအလျှောက်စာရင်းအင်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ Automtaic ဆန်ထုပ်ပိုးစက်.
5.ဆန်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်သည်မိမိကိုယ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲနှင့်လိုက်ဖက်သည်, အလိုအလျောက်ကျဆုံးခြင်းကိုပြင်ဆင်ခြင်း, ပြtroubleနာကိုအလိုအလျောက်စစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးပါ.
6. ယုံကြည်စိတ်ချရသောသွင်းကုန်အဆက်မပြတ် actuator ချမှတ်အော်တိုဆန်ထုပ်ပိုးစက်, ညစ်ညမ်းမှု မရှိ၍ ထိန်းသိမ်းထားရလွယ်ကူသည်.
7.Conveyor ပလက်ဖောင်း၏အမြင့်နှင့်အမြန်သယ်ဆောင်နိုင်သောအမြန်နှုန်းကိုအလိုလျောက်ဆန်ထုပ်ပိုးစက်. ပလက်ဖောင်းအရှည် 2.2m သို့မဟုတ် optional ကို 2.7m.
8.ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းနှင့်ထိတွေ့မှုသည်အန္တရာယ်ကင်းသောသံမဏိကိုအသုံးပြုသည်, သန့်ရှင်းပြီးတိုက်စားရန်မလွယ်ကူပါ၊ ဆန်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်၏သက်တမ်းသည်ကြာရှည်သည်.
ဆန်အလေးချိန်နှင့်ထုပ်ပိုးစက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို
5-50kg / အိတ်
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်ဖြစ်ပါတယ် 304 အစွန်းခံသံမဏိ